Warshadda Wershadda Wershadda iyo Warshadda Shiinaha.. Caaryada Aojie
Bixinta Qalabka Weelka Weelka: PP/PE Cabbirka # Adeegga OEM/ODM # Faahfaahinta xirxirida: sanduuqa alwaax Dekedda Maraakiibta: guangzhou
Sababtoo ah qaab dhismeedka biirka Crate aad buu u dhib badan yahay, waxaan qaadannaa gelinta naxaasta beryllium si loo yareeyo waqtiga qaboojinta oo qaab dhismeedka ayaa la adeegsadaa muddada duritaanka. Maaddaama sanduuqa biirku uu yahay qayb la isku qurxiyo, isbeddellada qaybaha caagga ah ee biirka ayaa loo baahan yahay inay yaraadaan si loo gaaro kulan caaryada ku habboon. Waa inaanay jirin wax irdaha ama raadinta biinka ah ee dusha sare ee qaybta caagga ah.
Darbiyada caaryada caagga ah ee beertu waxay u baahan yihiin in la jiido oo la adeegsado qaab dhismeedka Ha ee afarta dhinac. Soo -saaridda, mararka qaarkood ciriiriga haw ayaa aad u cidhiidhi ah, sidoo kale weelka biirku wuxuu ku jiraa khadka aan la kala soocin oo way adag tahay in la dejiyo. Si aan u xallino dhibaatadan, waxaan ka yeelnay Ha -guuxa iyadoo jillaabkii jiidaya isla markiiba ka guuray.
Magaca shayga: Caaryada Beerka Kaydka
Adeegga OEM/ODM #
Waqtiga hogaaminta: 25-55 maalmood kadib debaajiga
Faahfaahinta xirxirida: sanduuq alwaax ah
Shuruudaha Lacag -bixinta & Gaadiidka Shuruudaha bixinta: T/T (30% deebaaji, 70% kahor shixnadda)
Dekedda Maraakiibta: guangzhou
Hore: Auto Qaybo kale caaryada
Xiga: Caaryada Beeraha Beeraha
Caaga Kaydka Roodhida wax taaj oo kale
Caaga Weelasha duritaanka caaga